‘Ilmikoo oboleessa isaa quxisuu barbaaduu ba’ee ajjeefame’-Abbaa Sooddootti ilma dhaban – Kichuu
HomeAfaan OromooNews‘Ilmikoo oboleessa isaa quxisuu barbaaduu ba’ee ajjeefame’-Abbaa Sooddootti ilma dhaban
Hookkara Wolaayitaa keessatti mudateen ilmasaanii hangafaa dhabuu kan dubbatan jiraataan magaalaa Sooddoo Obbo Tafarii Seefuu, ilmisaanii maandhaasaa barbaacha manaa ba’ee ajjeefamuu gaddaan cabanii dubbatan.
Dargaggoon umrii ganna 28, tasa manaa ba’ee galaafatame kun daran kan isaan boonsuufi hojjetaa mootummaa, kan hojiisaarratti collee ture ta’uu dubbatu abbaan kun.
Dargaggoon kun Yuuniversitii Arbaa Mincirraa gosa barnootaa Biizinas Maneejimantiin eebbifamee dhaabbata misooma interpiraayizii keessa hojjechaa ture.
Bakka hojiisaatii maatiisaa dubbisuuf galee Dilbata darbe (09,08,2020) wayita dhukaasi banamee turetti obboleessi isaa maandhaan waan mana hin turreef barbaacha ba’ee galaafatame jedhan Obbo Tafariin.
‘’Ilmi kiyya siiviliidha. Meeshaa waraanaa hidhatee hin turre. Homaa waan beeku hin qabu. Harkasaa duwwaa obboleessa quxisuu isaa barbaacha ba’ee hafe’’ jedhan.
Gaaffiin naannoo ta’uu uummata Walaayitaa erga gaafatamee waggaa 15 caaleera kan jedhan Obbo Tafariin, gaaffiin sun osoo deebii hin argatin amma ammoo qondaaltota saba kanaa hidhuun uummata dallansiiseera jedhan.
Mormii Walaayittaa hordofee lakkoofsi namoota ajjeefamanii 16 gahe
Kanarraa kan ka’e Dilbata darbe dargaggoonni hiriira ba’anii gaaffiisaanii wayita dhiyeessaa turanitti, ilmi koo Tasfaayeen obboleessa isaa hiriirtota keessa barbaaduu wayita deemetti ajjeefame jedhan Obbo Tafariin.
Wayita hookkarri akka malee ho’ee fi dhukaasi baname sanatti hin deemin jedhee dhowwus inni garuu obboleessa isaa baraaruuf jedhee na didee manaa ba’ee achiinis hafe jedhan.
Ilmisaanii Tasfaayeen manaa ba’ee yeroo xiqqoo booda rasaasaan rukutamee hospitaala seenuu hiriyaansaanii bilbilaan akka itti himan kan dubbatan Obbo Tafariin, wayita Hospitaala Sooddoo ga’anis sababii dhkkubsattoonni Covid-19 achi keessa jiraniif ol-seenuu akka dhorkaman himan.
Hospitaala kanaa ol-seenuus ta’e gadi ba’uun hin iyyamamu ergaa jedhu erga dhagahanii booda, darbanii gara hospitaala biraa deeman, Kiristaan Hospital.
Hospitaala kana deemanii wayita ilmasaanii argatan, qaamni isaa rasaasa shaniin akka rukutamee jiru baran.
Osuma wal’aansi fayyaa godhamaafii jiruu, rasaasa garaasaa keessa jiru osoo baasuuf jedhanii lubbuunsaa darbuu dubbatu Obbo Tafariin.
Obbo Tafariin erga ilmasaanii hospitaalatti arganii, haalli fayyummaasaa maalirra akka jiru irra deddeebiin doktaroota gaafachaa turanis, boodarra ilmisaanii rasaasaanii akka du’e karaa namaa dhagahuu dubbatan.
Halkan keessa konkolaataa kadhatanii reenfa ilmasaanii fudhatanii akka galan kan dubbatan Obbo Tafariin ilmi isaanii inni kan biraan garuu rakkoon tokkollee osoo irra hin ga’in gara manaatti gale jedhan.
Abbaa ijoollee shanii kan ta’an Obbo Tafariin ilmisaanii hangafaa barnootasaa xumuree milkaa’ee hojii argatee, garuu osoo dhala hin godhatin karaatti cituusaatti akkaan akka gaddan dubbatan.
Dhalli isaanii akkasitti rasaasa shaniin reebamee ajjeefamuu caalaa kan isaan gube qaamni mootummaa maaliin du’e jedhee gaafatu dhabamuu fi haqi isaa lafatti baduutu garaa koo na guba jedhan.
Hookkara tibbana Walaayitaa keessatti uumameen namoonni 16 ajjeefamuu madden hospitaalota godinichaa irraa arganne mirkaneessaniiru.
Jila dhimma naannoo ta’anii hundaa’uurratti xiyeeffachuun taa’amerratti qondaaltonni mootummaa, ogeeyyiin seeraa fi jaarsoliin biyyaa hirmaatan hidhamuutu hookkara kanaaf sababa ta’e.
Manni Maree Godina Walaayitaa yaa’iisaa ALI Waxabajjii 15, 2012 taa’een Mootummaan Naannoo Walaayitaa akka hundaa’uuf murtee dabaree ture.
የወላይታ ዞን አመራሮች እና የሀገር ሽማግሌዎችን መለቀቅ አስመልክቶ
Hogganaa keenya hidhanii hogganaa biraa barbaannaa? Yoo dhuguma hogganaa biraa barbaanna ta’e rakkoo guddaa keessa jirra. Oromoon hoggana isaa hiikuuf finciluu qaba. Xiiqiin itti dhagayamuu qaba. Maaliif hoggana kiyya narraa hiitan jedhee lafa sochoosuu qaba. Kana hin goonu taanaan, hogganaan biraatis yoo dhufe ni dhabamsiisu. Oromoon hoggana isaa mana hidhaarraa baafachuu irratti xiyyeeffachuu qaba malee hoggana biraa baasuu qaba jedhee ammatti dhiphachuutti hin amanu. Xiiqiin ka’ii fincili. Warri Wolaayittaa hoggana biraa hin barbaanne. Kan hidhame hiiksuuf dachii sochoosan. Nutis kaanee dachii sochoofnee hoggana keenya hiiksifachuu qabna. Isaan baafannee isaan ammoo daandii bilisummaa nutti agarsiisuuf warra gahumsa qabu. Kanarratti xiyyeeffachuu barbaachisa!
We Can’t Breathe! -IM- (OromoProtests)